Etu esi ebudata vidiyo TikTok na -enweghị akara mmiri na SSSTikTok | Androidsis
Uto nke TikTok nwetara kemgbe mmalite ya na -egosi naanị netwọkụ mmekọrịta dịka anyị siri mara ha nke ọma ha ga -eme ma ọ bụrụ na ha chọrọ ime mgbanwe maka oge ọhụrụ. Ụfọdụ, dị ka Instagram na Facebook, raara onwe ha nye ijikọta arụmọrụ asọmpi ha na nyiwe ha.
Otu njiri mara ọhụrụ agụnyere na Instagram bụ vidiyo TikTok ụdị na vidiyo emere baptizim dị ka Reels, agbanyeghị na ha enweghị otu ihe ịga nke ọma dị ka TikTok. Ọ bụrụ na ọ dịtụla mgbe i chere otu esi ebudata vidiyo na TikTok enweghị akara mmiri, ị bịarutere ebe kwesịrị ekwesị.
Vidio niile ezigara na TikTok tinye akara mmiri na aha ikpo okwu tinyere onye dere vidiyo. Anyị ghọtara na aha onye ọrụ ga -apụta ee ma ọ bụ ee na vidiyo ahụ ebe ọ na -enye anyị ohere ịmata ya na netwọkụ mmekọrịta ma ọ bụrụ na anyị nwere mmasị na ọdịnaya ya, agbanyeghị, aha TikTok karịrị akarị.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ka ị ga-esi budata vidiyo TikTok na -enweghị akara ọmarịcha mmiri, otu n'ime usoro kachasị mma iji mee ya bụ SSSTikTok. Ọ dabara nke ọma, ọ bụghị naanị ya ka enwere ebe enwere ọtụtụ ụzọ ọzọ ma ọ bụ karịa, yabụ ọ bụrụ na ọ kwụsị ịrụ ọrụ anyị nwere ike iji ndị ọzọ.
1 Otu esi ebudata vidiyo TikTok na -enweghị Watermark
2 Budata vidiyo TikTok na -enweghị Watermark
Otu esi ebudata vidiyo TikTok na -enweghị Watermark
SSSTikTok na -enye anyị ohere ibudata vidiyo TikTok na -enweghị akara mmiri, mana na -enyekwa anyị ohere budata naanị ọdịyo vidiyo a na -ekwu.
Ikpokoro a wepu akara mmiri ọ bụla na vidiyo ahụ, yabụ anyị ga -enweta vidiyo anyị nwere ike ịkekọrịta dịka ọ bụ nke anyị (aha onye okike apụtaghị), ihe enweghị mgbagha na -adịghị mma (ebe ọ na -ezuru ọdịnaya ndị okike ndị ọzọ) anyị nwere ike ime ya. na -enweghị nsogbu.
para budata vidiyo si na TikTok jiri SSSTikTok, anyị ga-emerịrị ihe ndị m gosiri gị n’okpuru:
Anyị na -emepe ngwa TikTok. Mgbe anyị chọtara vidiyo anyị chọrọ ibudata, pịa na share bọtịnụ ma emesia Detuo njikọ.
Ọzọ, anyị na -aga na weebụ SSSTikTik site na ihe nchọgharị.
Mgbe ahụ anyị na -edenye adreesị ahụ na igbe oghere nke egosiri ma pịa bọtịnụ download.
N'ikpeazụ gosi atọ nhọrọ:
Enweghị mmiri mmiri: Ọ ga -ebudata vidiyo ahụ na -enweghị akara mmiri ọ bụla.
Enweghị akara mmiri (2): A ga -egosipụta vidiyo na ihuenyo zuru oke na -enweghị nbudata.
Budata MP3: Nhọrọ a ga -ebudata naanị ọdịyo na vidiyo ahụ.
Vidio ahụ ga -echekwa na ọba foto anyị, site na ebe anyị nwere ike ịkekọrịta ya site na netwọkụ mmekọrịta, nyiwe ozi ...
Ọ bụrụ na ịchọghị iji ihe nchọgharị ahụ, nhọrọ akwadoro, anyị nwere ike iji ngwa dị na Storelọ Ahịa Play. Ngwa SSSTikTok dị maka nbudata n'efu yana gụnyere mgbasa ozi.
Ihe nbudata vidiyo maka TikTok - Enweghị akara mmiri
Developer: Ọnye na -bụ Barry Guevremont?
Ngwa a na -arụ ọrụ dị ka weebụsaịtị, ewezuga akara mmiri TikTok ọ bụla. Mgbe m kwuru na ọ bụ nhọrọ kacha mma, ọ bụ n'ihi anyị na -ezere ịwụnye ngwa nke anyị nwere ike iji na mberede ibudata vidiyo site n'elu ikpo okwu a.
Ọ bụrụ na ibudata vidiyo na -aga n'ihu, o doro anya ụdị weebụ abụghị nhọrọ, mana ọ bụrụ maka ndị ahụ na -ebudata vidiyo oge ụfọdụ, ebe ọ bụ na ha na -ezere itinye ngwa ahụ, mgbe ha na -eji ya ntakịrị, ha anaghị echeta na ha etinyere ya.
Lee, anyị ga-egosi gị otu esi ebudata vidiyo na TikTok na ngwa SSSTikTok maka gam akporo (Ngwa a adịghị maka iOS).
Anyị na -emepe ngwa TikTok na pịa bọtịnụ Share nke vidiyo anyị chọrọ ibudata na anyị idetuo njikọ ahụ.
Ọzọ, anyị na -emepe ngwa, na anyị na -etinye njikọ ahụ site na bọtịnụ njikọ Tapawa.
N’ikpeazụ anyị pịa bọtịnụ ahụ Budata site na ntaneetị.
Vidiyo ebudatara site na ngwa ahụ na -echekwa na taabụ Nbudata, nke anyị nwere ike ibupu ha na ọba ma ọ bụ kesaa ya ozugbo.
Budata vidiyo TikTok na -enweghị Watermark
Ngwa ọzọ na -atọ ụtọ anyị nwere iji budata vidiyo na TikTok na -enweghị akara mmiri bụ Budata vidiyo si na TokTok, ngwa anyị nwere ike budata kpamkpam n'efu yana nwere mgbasa ozi.
Agbanyeghị, dị ka ngwa ndị ọzọ dị na Storelọ Ahịa Play iji budata vidiyo, ndị a echekwara n'ime ngwa ma ọ bụghị na ọba ahụ, n'agbanyeghị na anyị nwere ike mbupụ ha na album ka ha nwee ya mgbe niile ma ọ bụrụ na anyị ehichapụ ngwa ahụ, anyị agaghị efunahụ ọdịnaya niile ebudatara.
Ọrụ nke ngwa ahụ dị mfe:
Ọzọ, anyị na -emepe ngwa, na anyị na -etinye njikọ ahụ na oghere oghere dị n'elu ngwa.
N’ikpeazụ anyị pịa bọtịnụ ahụ download.
Otu n'ime isi ihe kacha adọrọ mmasị na ngwa a bụ Ụdị taabụ, kedu vidiyo ndị na -ewu ewu n'oge ahụ na anyị nwere ike ibudata na -enweghị akara mmiri na ngwaọrụ anyị na -enweghị idetuo na mado njikọ.
Budata vidiyo TikTok na -enweghị Watermark - Tmate
Developer: Ụlọ ọrụ Secure Soft Inc.
Ọnụ ọgụgụ ngwa na ibe weebụ na -enye anyị ohere ibudata vidiyo na -enweghị akara mmiri TikTok dị elu nke ukwuu, yabụ na anyị gụnyere naanị nhọrọ 3, nhọrọ nke m, nye nsonaazụ kacha mma, yabụ na ọ dịghị mkpa ịchọ nhọrọ ndị ọzọ.
Ọrụ SnapTik dị mfe, dịkwa ka ụzọ isi budata vidiyo site na webụsaịtị SSSTikTok. Ihe mbụ anyị ga -eme bụ pịa bọtịnụ ịkekọrịta vidiyo anyị chọrọ ibudata.
Ọzọ, anyị na -emepe weebụsaịtị SnapTik na anyị na -etinye njikọ ahụ na igbe oghere dị na elu ihuenyo wee pịa bọtịnụ Budata site na ntaneetị.
Dịka SSSTikTok, webụsaịtị a na -enyekwa anyị Ngwa ngwa ngwa, ngwa anyị nwere ike ibudata n'efu site na njikọ nke m gosiri gị n'okpuru.
SnapTik - Ihe nbudata Tiktok
Developer: Ihe nbudata vidiyo SnapTik
Ngwa SnapTik abụghị naanị na -enye anyị ohere ibudata vidiyo na TikTok kamakwa, Ọ na -enyekwa anyị ohere ibudata vidiyo site na Facebook, Instagram na Twitter, yabụ, ọ bụ ngwa dịgasị iche karịa nke SSSTikTok nyere.
Ọ bụrụ na-emekarị budata vidiyo na netwọkụ mmekọrịta ndị ọzọ, ngwa a bụ nhọrọ dị mma ịtụle, ebe ọ na -enyekwa anyị ohere belata ọnụ ọgụgụ ngwa anyị etinyere na ngwaọrụ anyị ma na -ezerekwa iji ibe weebụ wee budata ọdịnaya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Etu esi ebudata vidiyo TikTok na -enweghị akara mmiri na SSSTikTok
Ihe ị ga -eme ma ọ bụrụ na igwe okwu mkpanaka m anaghị arụ ọrụ